Ethylene Oxide mahafeno ny fenitra eoropeanina (isoflavone soja)
Araka ny CCTV, ny masoivoho fiarovana ara-tsakafo ao amin'ny Vondrona Eoropeana dia nitatitra vao haingana fa ny ethylene oxide, carcinogène kilasy voalohany, dia hita tao amin'ny paty avy hatrany naondranan'ny orinasa vahiny tany Alemaina tamin'ny Janoary sy Martsa tamin'ity taona ity, hatramin'ny 148 heny noho ny sandan'ny EU. Amin'izao fotoana izao, namoaka fampitandremana ny masoivoho...
Ny fanatanjahan-tena isan'andro, ny fampihenana ny kaloria 200 dia afaka manampy anao hitazona ny fonao ho salama
Isika rehetra dia nandre ilay fitenenana hoe: Ny fihinanana sakafo sy ny fanatanjahan-tena no fomba tsara indrindra hampihenana lanja, izay mampiseho fa ny fihenan'ny lanjany no famantarana lehibe indrindra amin'ny fahasalamana amin'ny ankapobeny. Saingy rehefa manao ireo dingana ireo dia tsy midika ho fihenan'ny lanjany, ny mandre an'io mantra io dia mety hahakivy. Na izany aza, araka ny st...
Ny angon-drakitra mitambatra dia milaza fa ny isoflavone soja dia tsy atahorana ho an'ny voan'ny kanseran'ny nono
Mety tsy mitombina ny ahiahy momba ny mety ho fitomboan'ny mety hiverenan'ny homamiadan'ny nono amin'ny fihinanana isoflavone soja, araka ny angona mitambatra avy amin'ny vehivavy 16,000 mahery.
Ry Mpanjifa Rehetra: Satria tsy mitsaha-miakatra ny akora rehetra, ny herin'ny tampon'isan'ny governemanta dia miteraka fiakaran'ny vidim-pamokarana sy fihenan'ny fahafaha-manao. Marihina fa hisy fanitsiana ny vidiny sy ny fotoana fanaterana aorian'ny fetim-pirenena. Fotoam-pialan-tsasatra nasionaly: O...
2021 WPE&WHPE CHINA( TANANA XIAN)
nataon'ny admin tamin'ny 21-08-07
Mpamatsy fitrandrahana zava-maniry avo lenta, mpiara-miombon'antoka stratejika azo itokisana amin'ny fitrandrahana zava-maniry "Mamorona fiainana tsara kokoa sy fiainana salama" Voankazo voajanahary iraisam-pirenena any Sina Andrefana, fanafody manta...
Andrographolide dia vokatra botanika nalaina avy amin'ny anana izay hita voajanahary any Shina. Ny anana dia manana tantara be dia be momba ny fampiasana amin'ny TCM amin'ny fitsaboana ny areti-mifindra amin'ny taovam-pisefoana ambony sy ny areti-mifindra sy areti-mifindra hafa. Andrographis paniculata dia nampidirina sy namboly...
Resveratrol dia antitoxine polyphenolic hita amin'ny karazana zavamaniry isan-karazany, anisan'izany ny voanjo, voaroy ary voaloboka, izay matetika hita ao amin'ny fototry ny polygonum cuspidatum. Resveratrol dia nampiasaina mba hitsaboana ny areti-maso any Azia nandritra ny an-jatony taona. Tao anatin'ny taona vitsivitsy, ny tombontsoa ara-pahasalamana ny mena ...
Tamin'ny taona 1931, sambany no nitokana sy nalaina tamin'ny soja. Tamin'ny 1962, Sambany no nanamarina fa mitovy amin'ny estrogen mampinono izy io. Tamin'ny 1986, ny mpahay siansa amerikana dia nahita isoflavone ao anaty soja izay manakana ny sela homamiadana. Tamin'ny 1990, ny National Cancer Institute of the United States ...
Ny vidin'ny Soybean dia mijanona eo amin'ny tsena
Tao anatin'ny enim-bolana farany, ny Departemantan'ny Fambolena Amerikana dia namoaka tsy tapaka ny tatitra momba ny fanisana isan-telo volana sy ny tatitra momba ny famatsiana sy ny fangatahana isam-bolana momba ny vokatra fambolena, ary ny tsena dia manahy momba ny fiantraikan'ny trangan-javatra La Nina amin'ny famokarana soja any Arzantina, ka .. .
2021 China West Int'l Plant Extract Fampirantiana akora simika fanafody
Daty fampirantiana: Jolay 28-30, 2021 Toerana: Xi'an International Conference Center (Chanba) 2021 "China West Int'l Plant Extract Pharmaceutical Material Exhibition" dia hetsika goavana miaraka amin'ireo mpividy sy manam-pahaizana momba ny indostria ao an-toerana sy iraisam-pirenena. Ny fampirantiana w...
Ny sandan'ny anjara Sichuan Uniwell Biotechnology Co., Ltd.
No.5, Lalana Binjiang, Qionglai, Chengdu, Sichuan, Sina
Raha mila fanontaniana momba ny vokatra na ny lisitry ny vidiny, azafady avelao ny mailakao ary hifandray izahay ao anatin'ny 12 ora.
© Copyright - 2010-2021 : Zo rehetra voatokana. - 蜀ICP备14014696号 -